Ciyaar lagu weynaynayay 1 Luulyo oo Kuwait lagu qabtay-Sawirro – Radio Muqdisho
Xoghayaha Koowaad ee Safaaradda Soomaaliya ee Kuwait Md. Farxaan Cabdi Gurxan iyo guddoomiyaha golaha hidaha iyo dhaqanka Eng. Maxamed Axmed Daahir ayaa si wada jir ah u furay ciyaaraha kubada cagta ee koobka maamuuska maalinta xorriyadda Qaranka 1 Luulyo oo ka furmay dalka Kuwait.
Cayaarahan oo socon doona muddo 3 maalmod ah ayaa waxaa soo qaban qaabiyay golaha hidaha iyo dhaqanka iyadoo ay ka qeybqaadan doonaan ilaa 12 Kooxood oo ah dhallinta Soomaaliyed ee key nool dalka Kuwait.
Ujeeddada cayaarahan ayaa ah in lagu weyneeyo shucuurka wadaniga ah ee dhallinta Soomaaliyeed ee Kuwait kuwaas oo intooda badan ku dhashay halkan, weligoodna aan fursad u helin in ay dalkii hooyo arkaan.
Inta ay ciyaaraha socdaan ayaa wax barbar socda program dhalinyarrada looga sheekeynayo halgangee dheeraa ay ummaddo soomaaliyeed u soo martey xoriyadda sidoo kale waxaa dhalinyarrada loo soo bandhigey sawiro guud oo ka tarjumayo horumarka uu dalku hadda ku talaabsadey taas ula jeedkeedu yahay baraarujin dhalinyarrada halkaan ku dhalatey in uu dalkoodu u baahanyahay isla markaan muhiim tahay in ay soo booqdaan dalkooda hooyo.
Barnaamijka kulanka todobaadka oo looga hadlay dhismaha maamulka Galmudug “Dhageyso+Sawirro”